माछापुच्छ्रेको क्यानोनिङ पोखराको पर्यटनमा थपिएको साहसको अर्को अध्याय (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
माछापुच्छ्रेको क्यानोनिङ पोखराको पर्यटनमा थपिएको साहसको अर्को अध्याय (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Jun 21, 2019
१. माछापुच्छ्रेको क्यानोनिङ पोखराको पर्यटनमा थपिएको साहसको अर्को अध्याय
पोखराको सुन्दरतालाई थप लोभ्याउने प्राकृतिक उपहारसंगै अन्य धेरै मानव निर्मित तथा सिर्जित पक्षहरुको उपस्थिति पनि कम छैन् । पोखराको आकर्षणमा थप मलजल गर्ने यस्ता पक्षहरुको उपस्थिति र प्रस्तुति पनि प्रभावकारी बन्दै आएको छ । पोखराको पर्यटनसंग जोडिएको पछिल्लो विषय हो क्यानोनिङ । साहसिक खेलबाट पनि पोखरालाई जोड्ने यो अर्को कसी बनेको छ ।
प्याराग्लाइडिङको उपस्थिति प्रभावकारी बन्दै गर्दा अब क्यानोनिङले पनि पोखराको पर्यटनलाई थप सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा रहेको क्यानोनिङ खेलमा रमाउनेहरुको भीड दिनानुदिन बढ्दो छ ।
एक पटक पुगेपछि दोहो¥याएर पुग्न मन लाग्ने यो ठाउँमा पर्यटकको सुविधाका लागि पनि बिभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएको छ । सम्भावना भएकोले पनि पछिल्लो समय नेपालमा साहसिक खेलप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । माछापुच्छ्रे क्यानोनिङले पनि त्यही सम्भावनामा थप मलजल गरेको छ ।
२.विदेशमा पसिना बगाएपनि घर फर्किएर सुरु गरेको गाईपालनले नै आनन्द दियो
गाईपालन पछिल्लो समय युवाहरुको रोजाईको विषय बन्दै गएको छ । दूग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने नेपालको प्रयासमा युवाहरुको यो झुकाव वास्तवमा नै अनुकरणीय छ । त्यसमाथि वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएका युवाहरु नै कृषि कर्ममा लागेपछि समृद्ध नेपालको सुखी नेपालीको सरकारी सपनामा थोरबहुत भएपनि भरथेग हुने अवस्था देखिएको छ ।
मेहेनत गरे सुन फल्ने धर्ती यही हँदा हुँदै विदेशी भूमिमा भौतारिने युवाहरुका लागि धेरै स्थानमा गतिलो सन्देश दिने गरी युवाहरुले धेरै कर्म गर्दै आएका छन् । त्यसमाथि विदेशको तातो वालुवा चालेर फर्किएका एक युवाले बागलुङमा गाईपालन गरेर देखाएको कर्म धेरैका लागि वास्वतमा नै गतिलो सन्देश बनेको छ ।
३.संस्कृतिको निरन्तरता नै जातिको अस्तित्वको रक्षाकवच भन्ने बुझ्दै युवा पुस्ता
आफ्नो भाषा र संस्कृतिप्रति लोभ र प्रेम कस्लाई नहोला र ? तर पछिल्लो समय पछिल्लो पुस्ता आफ्नै धर्म,संस्कार र संस्कृतिप्रति बेखबर र अनुदार बन्दा यस्को निरन्तरतामा प्रश्न उठनु र चिन्ता लाग्नु स्वभाविक नै हो । यही अवस्थाले पिरोलेपछि तनहुँका बिभिन्न समुदाय भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा समर्पित हुन थालेका छन् ।
संस्कृतिको निरन्तरता नै जातिको अस्तित्वको रक्षाकवच हो भन्ने यथार्थलाई बुझेका तनहुँवासी बिभिन्न जातजाति र समुदायले अहिले हरेक कार्यक्रममा आफ्नो जातिगत र समुदायगत प्रस्तुतिलाई महत्व दिन थालेका छन् ।